MATIO 5.13–26	F.6 | Fitandremana Ankadifotsy
MATIO 5.13–26	F.6
ASEHO HO HITA
Fanasina sy Fahazavana. Mahavariana mihitsy eto ny fomba fampitan’i Jesoa ny fampianarany amin’ireto olona izay tiany hitombo amin’ny fanarahana Azy. Zava-misy eo amin’ny fiainana andavanandro no itarihany ny sain’izy ireo. Ny isanandroko mihitsy no tokony haneho fa mpianatry ny Tompo aho. Antsoin’i Jesoa isika izay mitondra ny anarany (Kristianina) mba ho sira manome tsiro sy miaro amin’ny fahalovana, ho jiro hanazava, hanao soa (hiantra, hampihavana) (7,9) ary hampandositra ny haizina eny amin’ny tontolo izay nametrahany antsika eny.
Olona miavaka ianao ô ! Olona miavaka ianao satria efa nandray an’i Jesoa !
I Jesoa sy ny lalàna. Mampianatra koa ny Tompo eto fa ny fanarahana Azy dia tsy fahafantarana be fahatany ny lalàna fotsiny kanefa tsy mitondra amin’ny fahamasinana sy ny fankatoavana akory tahaka ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo (20). Tsy tonga hanafoana ny lalàna i Jesoa fa tonga hanatanteraka izany (17) ary hitarika sy hanampy ny mpianany hankato sy hampianatra ny hafa hankato izany koa (19).
Mahalala ny tenin’Andriamanitra ianao ? Tena tsara izany ! Fa manao ahoana kosa ny fiainam-pankatoavana ? “Ny fahalalana mampieboebo, fa ny fitiavana no mampandroso” (1 Korintiana 8.1)
Fampiharana: Ohatra velona no nomen’i Jesoa eto momba ny fankatoavana ny lalàna. Tsy ara-bakiteny fa aseho ho hita amin’ny fitondran-tena mihitsy . Te hankato ny hoe “aza mamono olona” aho ? Tsy tezitra tafahoatra, tsy mamingavinga, tsy manompa, tsy manambany ny mpiray finoana amiko (22).Te hanolotra fanatitra ho an’Andriamanitra ? Mamela ny helok’izay manana ady amiko ary mihavana aminy !
Fanontaniana: Inona no fanapahan-kevitra mivaingana raisinao androany ?